Fampahalalana momba ny Banky Offshore ho an'ny fiarovana sy ny fiainana manokana
Fampahalalana momba ny Banky Offshore
Banky Offshore dia mametraka kaonty any ivelan'ny tanin'ny firenena iray. Ny tanjona dia matetika amin'ny fiarovana amin'ny fiantohana, ny tahiry amin'ny hetra (miankina amin'ny firenena ao amin'ny tompon'ny kaonty), ny fiainana manokana momba ny fitantanam-bola sy ny fananganana fananana. Satria ny 96% amin'ireo hetsi-panoheran'izao tontolo izao dia mitranga any Etazonia, maro ireo Amerikana no nitady ny jurisprudence ivelan'ny sisintany mba hiantohana ny harenany amin'ny safidy azo antoka.
Indraindray, lohatenim-baovao mikasika ny banky ivelan'ny banky. Ny vaovao tsara dia mametraka dokam-barotra latsa-danja noho ny vaovao ratsy, ny ankamaroan'ny fifantohana dia manjary eo amin'ny sehatry ny banky ivelan'ny banky: ireo mpanao didy jadona vahiny izay manafina ny fampitrosana tsy ara-dalàna, ireo mpandraharaha tsy mitongilana miafina an-tsokosoko dia nahazo tombony, ny fiaramanidina, sns. Ireo tantara dia mifandray amin'ny fitsipika napetraky ny governemanta Amerikana. Lasa an-taonany maro ny fitsipika hifehezana ny hetraketraky ny hetra, mandoa vola amin'ny asa fampihorohoroana sy fanadiovana vola avy amin'ny zava-mahadomelina sy loharanom-baovao tsy miankina. Mazava ho azy fa mila manao fihetsiketsehana ny governemanta federaly rehefa mifampiraharaha amin'ireny kaonty ireny.
Na dia natao hanakanana ny hetsika tsy ara-dalàna aza ireo fitsipika ireo, dia tsy miraharaha ireo olona te-hampiasa ny banky ivelan'ny banky ny governemanta governemanta ho toy ny drafitry ny fiarovana fiarovana. Ny fampiasana banky ivelan'ny banky miaraka amin'ireo orinasa iraisam-pirenena toy ny LLC sy ny fitokisana dia mihamitombo hatrany hatrany noho ny fitomboan'ny fandrahonana.
Inona avy ny fiovana ara-politika natao ary matetika izy ireo no mifantoka matetika amin'ny firenena. Miezaka manara-maso ny asan'ny firenena sasany i Etazonia, ka mahita fa mety hampidi-doza kokoa ny fandrahonan'ny mpampihorohoro sy ny heloka bevava, ary tsy dia manahirana loatra ny manara-maso ireo firenena izay manana fifandraisana am-pirahalahiana.
Ohatra, ny governemanta Soisa, firenena iray amin'ny ankapobeny amin'ny teny tena tsara amin'ny Etazonia, dia tsy voatsindry tsara. Nanaiky ny fiovan'ny politikan'ny fiarovana ny fiainana manokana izy io. Ity hetsika ity dia midika fa ny kaontin'ny banky Suisse, na dia mbola manome tolo-kevitr'izy ireo ho an'ny tompon'ny kaonty any ivelany aza, dia hampidina ny ampahany amin'ny fiarovany fiarovana amin'ny tsiambaratelo rehefa misy kaonty dia tafiditra amin'ny hetsika tsy ara-dalàna.
Firenena manolotra banky Offshore
Misy lalàna maromaro izay manolotra kaonty any amin'ny banky ho an'ny vahiny, anisan'izany ireo any Etazonia. Maro amin'ireo firenena ireo no tsy mahaliana raha ny governemanta Amerikana no manara-maso akaiky ny fotoana rehetra tsy ho ela. Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ireo voatanisa eto dia manana lalàna manokana momba ny tsiambaratelo mba hiarovana ny asam-panajana ataon'ny mpomba azy. Ny sasany amin'ireo firenena ireo dia ahitana, fa tsy voafetra ho:
Ny Nosy Virijiny Britanika
Ny Nosy Channel avy any Jersey sy Guernsey
Ny Nosy Man
Fikambanana "Offshore" any Etazonia
Ary koa ny lisitr'ireo firenena naseho etsy ambony, dia misy ihany koa ny fahafahana ho an'ireo olona miaina any ivelan'i Etazonia mba hahazoana fiarovana amin'ny banky mitovy amin'ny banky any amin'ny banky. Ohatra, i Delaware dia mitondra any amin'ireo tompon-trosa banky amin'ny tanana vitsy, na dia tsy ny rehetra aza, ny fiarovana sy ny fahaiza-manao, izay hita matetika amin'ireo izay mampiasa ny kaonty any amin'ny banky. Firenena hafa vitsivitsy izay miasa tsy misy hetran'ny orinasa vola dia afaka mitondra tombony amin'ny tompon'ny kaontin'ny banky. Anisan'ireny fanjakana ireny ny Nevada, Washington, ary Wyoming. Noho izany, olona iray any Etazonia izay tsy vonona ny handeha any an-dranomasina na olona monina any ivelan'i Etazonia dia manana safidy sasantsasany ao Etazonia.
Tombontsoa amin'ny fananana kaonty Banky Offshore
Ny kaonty any amin'ny banky na banky iray izay misokatra eo ambany fiandraiketana ivelan'ny tranokalan'ny tompon'ny kaonty dia ampiasaina ho an'ny sasany amin'ireto antony ireto:
Ny ankamaroan'ny kaonty banky offshore dia manome tolotra hafa ho an'ny vidiny ambany noho ny kaonty any Etazonia. Ny Banky Offshore dia manolotra tombontsoa tsara kokoa noho ny zavatra natolotra tany Etazonia. Nahoana? Satria ny ambany vola amin'ny banky dia ambany kokoa amin'ny firenena maro. Izany dia miteraka vola bebe kokoa any amin'ny banky mba hanonerana ny mpametra-bola.
Maro ireo jurisdictions izay mamela ny kaontin'ny banky ho an'ireo vahiny vahiny amin'ny ankapobeny dia miaraka amin'ny taham-petra ambany kokoa, manintona ireo karazana orinasa roa sy olom-pirenena tsirairay mba hanao raharaham-barotra miaraka amin'izy ireo. (Mahatsiaro fa ny vahoaka amerikana dia haba amin'ny fidiram-bola maneran-tany na inona na inona raha tsy "averina" na "tsy" ny volany.)
Mandoa vola amin'ny vidiny ambany.
Lalàna kely kokoa rehefa mitaky vola.
Ny ampahany betsaka amin'ny banky any ivelany dia manome tsiambaratelo maro ary matetika mahatonga ny vahiny tsy hahazo vaovao momba ny orinasa na ny olona izay mihazona ilay kaonty. Privacy varies by country.
Ny firenena manana governemanta miorina sy miroborobo dia mitondra fiarovan-tena amin'ny olana ara-toekarena, ara-politika ary ara-bola izay mety hitranga any amin'ny fireneny. Mazava ho azy, ireo firenena matanjaka ireo dia manome safidy tsara ho an'ny fampiasam-bola ho anao sy ny orinasa. Satria mitohy mihamitombo ny toekarena any Etazonia, miezaka ny misintona ny fitsangotsanganana farany, ity vinavina ity dia lasa manintona kokoa hatrany ny antoko tsy miankina sy ny orinasa.
Betsaka ny safidy fampiasam-bola betsaka. Mifanohitra tanteraka amin'izay mety ho tian'ny mpampiasa vola amin'ny kaonty banky any amin'ny fireneny. Betsaka ny olona manapa-kevitra ny hisafidy fampiasam-bola any ivelany na ny kaonty any ivelany dia mahita fa ireo kaonty ireo dia tsy vitan'ny hoe manana rafitra tsara kokoa fa ny avotsotra mora azo. Ohatra, maro ny banky amoron-dranomasina no manolotra kaonty mahaliana, safidy fampiasam-bola amin'ny tsena, vatosoa sarobidy, sns., Eo ambanin'ny tafo iray.
Afaka mahazo banky amin'ny aterineto.
Fanampiana avy amin'ny mpanjifa. Betsaka ny tompon'ny kaonty any amin'ny banky tahaka ity serivisy mpanjifa ity dia azo jerena ao amin'ny faritra iray izay miovaova amin'ny an'ny tanindrazany.
Ny ankamaroan'ny olona mampiasa ny kaonty banky ivelan'ny banky dia manokatra ny kaontiny any amin'ireo orinasa misahana ny lalàna. Ireo orinasa ireo dia mety miovaova amin'ny orinasa orinasa sy orinasa tsy miankina amin'ny fitantanana fiarovana sy fiarovana amin'ny alàlan'ny fiarovana, arakaraka ny zavatra ilain'ny tsirairay.
Ireo kaonty Offshore dia ampiasain'ireo mpiasa nokaramain'ny mpiasa an-trano, iraisam-pirenena, mpandeha ary vahiny.
Ny tompon'ny orinasa koa dia mahita fa ny kaonty banky ivelan'ny banky dia manome tombontsoa amin'ny fampiasana rafitra fanavaozana ara-bola. Ny orinasa manandrana manao izany dia afaka mampiasa kaonty banky ivelan'ny banky ary mampiasa vondrona iraisam-pirenena maro, mamela azy ireo hampiseho tombony ara-bola na fahaverezana miankina amin'ny fomba fitantanana ampiasaina. Mazava ho azy, ny fampiharana ny lalàna sy ny hetra amin'ny hetra dia ampirisihana mafy.
Ny antony iray hafa mahatonga ny tompon'ny orinasa mampiasa kaonty banky ivelan'ny banky dia noho ny fahalalahana ao anatin'ny fepetra ara-bola ho an'ny orinasa, anisan'izany ny fahafahana haingana sy mora hampiasaina ireo mpiasa sy mpamatsy any amin'ny faritra vahiny.
Fantaro ny lalàna momba ny hetra
Ankoatra ny vaovao voaresaka tetsy ambony dia maro ny olona sy ny foto-kevitry ny orinasa mikasa ny hanangana kaonty banky ivelan'ny banky no manatona ity fikasana ity amin'ny finoana diso fa ny tombom-barotra, ny vola miditra sy ny karazana fidiram-bola hafa dia tsy voatery hetra any amin'ny toeram-ponenan'ny kaontin'ny kaonty. Ity fanombatombanana ity sy ny tsy fandoavam-bola amin'ny fireneny dia tsy vitan'ny hoe tsy ara-bola firy amin'ny orinasa, fa amin'ny ankamaroan'ny tranga ihany koa dia tsy ara-dalàna.
Ohatra, any Etazonia dia misy lalàna momba ny hetra izay mitaky ny olom-pirenena Amerikana hitatitra ny vola voavidy any amin'ny firenen-kafa, araka ny voalaza amin'ny endrika taxa amerikana 1040:
"Tsy maintsy mitati-bola tsy voavaha ianao, toy ny tombotsoa, ​​ny dividends, ary ny fisotroan-dronono, avy amin'ny loharano ivelan'ny Etazonia, raha tsy misy lalàna tsy azo atao na fifanarahana momba ny hetra. Tsy maintsy mampanao tatitra ihany koa ny fidiram-bola azo antoka, toy ny karama sy toro-hevitra, avy amin'ny loharano ivelan'ny Etazonia. "
Ankoatra izay, mipetraka ao amin'ny Fandaharam-potoana B, ny fangatahanao manokana, araka ny sokajin'ny Interest and Ordinary Dividends, dia mitatitra ny fahalianana sy ny fizarana amin'ny kaonty na fitokisana any an-dranomasina.
Noho izany, na dia eo aza ny fahatsapana matetika fa ny kaontin'ny banky ivelan'ny banky dia manala tsiny ny iray amin'ny fandoavana hetra amerikana, ny olona izay mameno ny endrika hetra dia afaka mahita fa diso io finoana io. Ny fomba fiasa ara-dalàna dia ny mitatitra ny vola miditra rehetra azo avy amin'ny orinasa. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny firenena dia mitaky ny olom-pireneny sy / na ny mponina mba hitatitra ny vola miditra ivelan'ny toerany.
Inona no tolotra ataon'ny orinasa any ivelany?
Ny ankamaroan'ny banky any ivelany dia manolotra karazana tolotra mitovy amin'ny banky Amerikana. Plus, amin'ny tranga maro, dia manolotra bebe kokoa izy ireo. Na izany aza, miankina amin'ny jurisdictions of the banky ampitan-dranomasina, mety miovaova ny lalàna sy ny fahafahana, ary mety hikorontan-tsaina ihany koa ireo fepetra napetraky ny governemantan'i Etazonia.
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny banky offshore dia manolotra:
Ny kaonty fitadiavam-bola amin'ny fitehirizam-bola ary ny fanamorana
Fikirakira fisotroan-dronono sy safidy tahiry
Fivarotana varotra iraisam-pirenena, fifanakalozam-bola vahiny, ary fifanakalozam-bola maro
Ny fametrahana kaonty banky offshore dia matetika tsotra. Voalohany, ny famoronana orinasa orinasa orinasa orinasa dia noforonina. Ny orinasa matetika dia tsy voatery hiorina ao amin'ny jurisdiction offshore toy ny kaonty banky. Faharoa, maro amin'ireny kaonty ireny dia mety hipoitra raha tsy mila mandeha. Noho izany, ny fahafahana mamorona iray amin'ireo kaonty ireo dia sady mora no mora. Noho ireo firenena samihafa azonao atao, azonao atao ny mifanandrify ny firenena voafantinao mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
Ny ankamaroan'ny banky any ivelany dia tsy hanokatra kaonty amin'ny banky ho an'ny vahiny. Ny sasany dia mahafinaritra ny miara-miasa ary ny sasany dia kely kokoa. Koa azo antoka fa hahazo fanampiana avy amin'ny manam-pahaizana manokana amin'ny banky any ivelany. Misy tarehimarika ao amin'ity pejy ity ary misy endrika iray mba hamitana ny fifanakalozan-kevitra amin'ny manam-pahaizana za-draharaha izay afaka mahazo anao ny vaovao ilaina mba handraisana fanapahan-kevitra.
Raha misaintsaina momba ny famolavola kaonty banky andrefana ianao ary misalasala fotsiny noho ny sasany amin'ireo fampahalalam-baovao ao amin'ny fampahalalam-baovao, dia fantaro fa mety ho mahafinaritra sy mahasoa ho an'ireo izay mitady fahalalahana ara-bola, fiarovana fiarovana, fiainana manokana, ary vitsy ny famerana. Manodidina ny dimampolo isan-jaton'ny renivola manerantany no mamakivaky ny kaonty any amin'ny banky. Midika izany fa malaza sy mahazatra ny kaonty any amin'ny banky.
Ny kaontin'ny banky Offshore amin'izao fotoana izao dia mihazona ny enina amby roapolo amby roapolo amin'ny harenan'izao tontolo izao. Ity sary ity dia ahitana orinasa goavam-be maro miorina any Etazonia ary mampiasa kaonty banky ivelan'ny banky mba hanararaotra ny tombontsoan'izy ireo. Ny sandan'ny vola amerikana izay nino fa natao tany amin'ny banky afovoan-tany dia vola 6 tapitrisa dolara, izay karazana harena goavana eto amin'izao tontolo izao.